Beyle: Dowladdu ma samaynin wax Canshuur kordhin ah (Sawiro) | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Beyle: Dowladdu ma samaynin wax Canshuur kordhin ah (Sawiro)
Beyle: Dowladdu ma samaynin wax Canshuur kordhin ah (Sawiro)
Wasiirka wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa/07/11/2017. MUQDISHO, Soomaaliya (Xuquuqda sawirka Wasaaradda Maaliyadda)
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa beeniyey warar sheegayay in wasaaraddiisu ay kordhisay canshuuraha la qaado.
Cabdiraxmana Ducaale Bayle oo warbaahinta Soomaalida kula hadlay xafiiska wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladdu ay damacsan tahay inay hirgeliso canshuurta iibka ee laga qaado alaabooyinka.
Waxaa uu sheegay in bixinta canshuurta iibka ay lagama maarmaan u tahay jiritaanka dawlandimada Soomaaliyeed.
Wasiir Bayle ayaa sidoo kale sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed todobaadka soo socda uu kulan la qaadan doono kaasi oo looga hadli doono arrimo muhiim oo arrimaha Canshuurta iyo in ganacsatada ay diyaar u noqdaan bixinta canshuurta iyo iney si dhaw ula shaqeyaan Wasaarada Maaliyadda.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federal-ka ah ee Soomaaliya oo war kooban soo dhigay barta uu Ku leeyahay aaladda Twitter-ka ayaa waxaa ku sheegay in ayaan jirin wax canshuur kordhin ah oo wasaaraddiisu ay samaysay.
Waxaan maanta qabtey shir jiraaid oo ku beeninayo warar been abuur ah.Ma jirto wax canshur ah ay Dowlada ku dartey maanta waa hadal been ah pic.twitter.com/UDGF33Y6wu
— Dr Abdirahman Beileh (@DrBeileh) November 7, 2017
Hadalka Wasiirka Maaliyadda ayaa imaanaya ka dib markii qaar ka mid ganacsatada Soomaaliyeed ee dekeda alaabta ka soo dejista ay warbaahinta u sheegeen in Canshuur kordhin lagu sameeyay.
Previous articleDaawo Sawirada Jawaari iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Kismaayo
Next articleSheekh Sacuud Al Mojeb: Musuqmaasuq la dagaalanku waa billaw